Ankafizo ny dia, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Miala tsiny aho raha mandany andro iray manontolo raha tsy mandeha irery amin'ny toerana iray; izay no mahatonga ahy manandrana mampiasa ny diako amin'ny fomba ahoana. Maka boky maro miaraka amiko aho, taratasy hovaliana, lahatsoratra havaozina, horonam-peo ary mazava ho azy ny sôkôla ho sakafo ho an'ny lalana! Ka na dia somary vaky ny diany na tonga tsy tara aho dia mbola afaka milaza aho fa nankafiziko ny dia satria tsy nipetraka fotsiny aho nanahy ny zavatra rehetra tsy mandeha na nahandro tamin'ny fahatezerana.
Moa ve tsy toy ny indraindray ny fiainana? Dia fiainana ny fiainana; afaka mankafy azy io koa isika ary mampiasa ny fotoana nomen'Andriamanitra antsika, na afaka miady amin'ny toe-javatra isika ary maniry ny tsy hisian'ny zavatra hafa.
Ndao isika hanohy hitadidy ny tanjona. Fa izahay koa mankafy ny dia amin'ny dia ny fotoana sy ny fampiasana ny fotoana. Manaova fitsangatsanganana!